နံနံပင် (Coriander) က ဘယ်လို ဆေးဖက်ဝင်လဲ - Hello Sayarwon
Dr. Su Sandy မှ ရေးသားသည်။ 15/02/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
နံနံပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နံနံပင်ကို အစာအိမ်မကောင်းခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အူကျခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျောခြင်း၊ ဗိုက်ရစ်နာခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ တို့ကဲ့သို့သော အစာအိမ်ပြသနာများကို ကုသရန်သုံးသည်။ ဝက်သတ်ပေါက်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်း၊သွားနာခြင်း၊ သန်ကောင်၊ နှင့် အဆစ်နာခြင်းများတွင် လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
နို့တိုက်မိခင်များတွင် နို့ထွက်များစေရန်လည်း Coriander ကို သုံးကြသည်။ အစားအသောက်တွင် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အသုံးပြုပြီး အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်လည်း သုံးကြသည်။ ဆေးနှင့် ဆေးလိပ်ထုတ်သည့်အခါတွင် အနံ့တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြု သကဲ့သို့ အလှကုန်များနှင့် ဆပ်ပြာများတွင် လည်း အနံ့အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် Coriander တွင် အဆီကျစေခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ကို သက်သောစေသော အာနိသင်မျာရှိကြောင်း အချို့သော လေ့လာမှုများက တွေ့ရှိထားသည်။ Coriander မှ ထုတ်သောအဆီကို အသုံးပြုသောအခါ ပိုးသတ်နိုင်သော အစွမ်းရှိကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိထားသည်။
နံနံပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Coriander ကို အလင်းရောင်နှင့် စိုစွတ်သောနေရာများနှင့် ဝေးရာတွင် အလုံပိတ်ဗူးထဲတွင် ထားပါ။
Coriander ကို ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ ၂ပတ်အလိုတွင် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ပါ။
Coriander ပင်သည် သွေးပေါင်ကျစေပြီး သွေးထဲမှ သကြားဓါတ်ကို ကျစေသည်။ သင့် သွေးပေါင်ချိန်နှင့် သကြားဓါတ်ကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးပါ။ သင့်တွင် သွေးပေါင်ကျတတ်လျှင် သို့မဟုတ် သွေးပေါင်ကျဆေးများသောက်နေလျှင် Coriander ကို သတိနှင့် အသုံးပြုပါ။
ဤဆေးပင်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးမပြုရပါ။ ကလေးများကိုလည်း မပေးရပါ။ ဆေးပင်ကို ဓါတ်မတည့်သူများတွင် အသုံးမပြုရပါ။
နံနံပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
• ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားပျက်ခြင်း၊ အသည်းအဆီဖုံးသော အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း
• ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို တုံ့ပြန်ခြင်း၊
ဤဆေးပင်သည် အခြားသော သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်သည်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ဆီးချိုကျသောဆေးများ၏ အာနိသင်ကို ပိုများစေသောကြောင့် ထိုဆေးများကို သောက်နေစဉ် သတိနှင့် အသုံးပြုပါ။
နံနံပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Coriander ကို အသုံးပြုရမည့် ပမာဏမှာ အသုံးပြုမည့် ပုံစံပေါ်တွင် မူတည်သည်။
• အဆီအနှစ်- ရေနွေးဆူဆူ ၁၅၀ မီလီလီတာထဲတွင် ဆေးရည် ၂ ဇွန်းထည့်ပါ။ ၁၅ မိနစ်ထားပြီး အစားမစားခင် ၂၅၀ မီလီလီတာ သောက်နိုင်သည်။
• ဆေးရည်- အစားစားပြီး ၁၀ စက် မှ အစက် ၂၀
• ဆေးပင်- တစ်ရက်လျှင် ၃ ဂရမ် ကို ခွဲပြီးသောက်ပါ။
နံနံပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ဤဘယဆေးပင်ကို အောက်ပါ ပုံစံများနှင့် ရနိုင်သည်။
Skidmore-Roth, Linda. Mosby’s Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.
Coriander. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 117-coriander.aspx?activeingredientid=117&activeingredientname=coriander. Assessed August 7, 2016.Skidmore-Roth, Linda. Mosby’s Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.
Coriander. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 117-coriander.aspx?activeingredientid=117&activeingredientname=coriander. Assessed August 7, 2016.
မုယော ရဲ့ကျန်းမာရေး အာနိသင်